Banyere Law & More B.V. | Iwu Iwu Dutch | Eindhoven na Amsterdam
Law & More bụ ụlọ ọrụ iwu dị iche iche na-arụ ọrụ na ngalaba na ụtụ isi ọkachamara na Dutch na ụlọ ọrụ azụmahịa na nke ụtụ isi ma dabere na Amsterdam yana Eindhoven Science Park - Dutch “Silicon Valley” na Netherlands. Ya na ụlọ ọrụ Dutch na ụtụ isi ya, Law & More na-ejikọ ịmama nke nnukwu ụlọ ọrụ na ndụmọdụ ndụmọdụ ụtụ isi ya na itinye uche na nkọwapụta na ọrụ ahaziri iche ị ga-atụ anya maka ụlọ ọrụ boutique. Anyị bụ ndị mba ụwa n'ezie n'ihe niile gbasara ọrụ anyị, anyị na-arụkwa ọrụ maka ọtụtụ ndị ahịa Dutch na ndị mba ofesi, site na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ndị mmadụ.
Law & More bụ ụlọ ọrụ iwu dị iche iche na-arụ ọrụ na ngalaba na ụtụ isi ọkachamara na Dutch na ụlọ ọrụ azụmahịa na nke ụtụ isi ma dabere na Amsterdam na Eindhoven Science Park - Dutch “Silicon Valley” na Netherlands.
Site na ụlọ ọrụ Dutch na ụtụ isi ya, Law & More na-ejikọ ịmama nke nnukwu ụlọ ọrụ na ndụmọdụ ndụmọdụ ụtụ isi ya na itinye uche na nkọwapụta na ọrụ ahaziri iche ị ga-atụ anya maka ụlọ ọrụ boutique. Anyị bụ ndị mba ụwa n'ezie n'ihe niile gbasara ọrụ anyị, anyị na-arụkwa ọrụ maka ọtụtụ ndị ahịa Dutch na ndị mba ofesi, site na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ndị mmadụ.
Law & More na-enye ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu mkpebi mkpebi esemokwu na ịgba akwụkwọ. Ọ na-eduzi nyocha nke ọma gbasara ohere na ihe ọghọm tupu usoro iwu niile. Ọ na - enyere ndị ahịa aka site na mgbe ọ bụla wee ruo na nke ikpeazụ nke usoro ikpe, na - atụkwasị ọrụ ya na atụmatụ echebara echiche nke ọma. Firmlọ ọrụ ahụ na-arụkwa ọrụ dị ka onye ọka iwu ụlọ maka ụlọ ọrụ Dutch na mba dị iche iche.
Firmlọ ọrụ anyị bụ onye otu netwọụ LCS nke ndị ọka iwu dabere na The Hague, Brussels na Valencia.
"Law & More na-ejide ma na-ejide akụkụ nke ọzọ ”
Usoro anyị maka ọtụtụ akwụkwọ na iwu Dutch, ọka iwu na ndụmọdụ ndụmọdụ ụtụ bụ iwu, azụmahịa yana ọfụma. Anyị na-ebu ụzọ abanye n’etiti ahịa na azụmaahịa nke ndị ahịa anyị. Site na ichere ihe ha choro, ndi oka iwu anyi nwere ike inye oru aka n’oru kachasi nma.
A na-ewukwasị aha anyị na ezigbo nkwa iji lebara ma mejupụta ihe ndị onye ahịa anyị chọrọ n'agbanyeghị agbanyeghị na ụlọ ọrụ dị iche iche, ọrụ Dutch, na-agbasawanye ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu. Anyị na-agba mbọ inyere ndị ahịa anyị aka n'ụzọ kachasị dị irè iji mezuo ebumnuche ha ma na-eburu n'uche oge gburugburu ụwa siri ike karị nke ha na-arụ ọrụ na ịzụlite azụmaahịa ha.
Ndị ahịa anyị nọ na etiti ihe niile anyị na-eme. Law & More Nke a mere na agba mbọ tozuru oke dịka ntọala nke anyị ji etolite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi ọkachamara anyị kpamkpam. Site na mbido anyị, anyị agbala mbọ na-adọta ndị ọka iwu nwere nghọta na ndị raara onwe ha nye na ndị ndụmọdụ ụtụ na-enye nsonaazụ kacha mma maka ndị ahịa anyị, ndị afọ ojuju bụ ndị na-ebute ụzọ onye anyị bụ na ihe anyị na-eme.
Site na mgbe ochie, Netherlands bụ ikike mara mma nke ukwuu ịhazi ya EU na ihe omume ụwa niile site na, itinye ego, imepe na imezu azụmaahịa. Netherlands nọgidere na-adọta ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ụwa na teknụzụ na ọkaibe yana "ụmụ amaala ụwa".
Anyị Onye Ahịa poratelọọrụ omume na-elekwasị anya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mba ụwa niile dịka ụlọ ọrụ ọha na nkeonwe jikọtara na Netherlands na ngafe.
The Ndị ahịa nkeonwe omume nke Law & More na-elekwasị anya na enyemaka nke ndị mmadụ n'otu n'otu na ezinụlọ mba ụwa, nke na-ahazi ọrụ azụmaahịa ha site na ikike ndị Dutch. Ndị ahịa ụwa anyị si mba na nzụlite dị iche iche. Ha bụ ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma, ndị nwere oke mmụta ruru eru na ndị ọzọ nwere mmasị na akụ na ikike dị iche iche.
Ndị ahịa anyị na ndị ahịa anyị na-anata ogo ọrụ nke ọrụ ahaziri, raara onwe ha nye na nke nzuzo, ahaziri iji gboo mkpa ha na mkpa ha.